Horudhac: Manchester United vs Sheffield United… (Red Devils oo garoonka Old Trafford ku soo dhoweynaysa kooxda ugu hooseysa horyaalka) – Gool FM
(Manchester) 27 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa kulan qeyb ka ah horyaalka Premier League waxa ay wajahaysaa Sheffield United.
Kulankan ayay Manchester United doonaysaa inay dib ugu soo laabato hoggaanka horyaalka Premier League, marka ay caawa garoonkeeda Old Trafford ku soo dhoweynayso kooxda halka ugu hooseysa ka hoggaaminaya horyaalka ee Sheffield United.
Red Devils oo wacdaro muujisay qeybtii hore horyaalka ayaa guul u baahan si ay Man City ugala wareegto hoggaanka horyaalka Premier League, waxaana ay wajahayaan kooxda Sheffield oo hal guul ka heshay 19 kulan oo ay ciyaartay horyaalka.
Marcus Rashford, kaasoo dhaawac yar ka soo gaaray jilibka intii lagu guda jiray gushii FA Cup-ka oo ay ka gaareen Liverpool ayaa taam u ah inuu wajaho Kooxda Sheffield United.
David De Gea, Eric Bailly iyo Bruno Fernandes ayay u badna tahay in dib loogu yeeri doono kaddib markii la nasiyey kulankii Liverpool ee FA Cup-ka todobaadkan.
Sheffield United waxaa ka maqnaan kara ilaa iyo sagaal ciyaaryahan oo waa weyn, oo uu ku jiro John Egan oo ganaax ku maqan.
Weeraryahanka Lys Mousset ayaa fursad u haysta inuu ciyaaro, isagoo taam u ah inuu u safro Manchester kaddib bil uu dhaawac garabka ah ku maqnaa.
>- Sheffield United ayaa guul ka gaari la’ Manchester United 10 kulan tartammada oo dhan tan iyo markii ay ka reebeen FA Cup-ka bishii Febraayo ee sanadkii 1993-kii.
>- Manchester United ayaa guuleysatay siddeed kulan oo xiriir ah oo ay garoonkeeda ku wajahday Shaffield tan iyo markii ay guuldarro kala kulmeen ciyaaraha sare ee horyaalka markaasoo 2-1 looga adkaaday ciyaarihii Boxing Day ee sanadkii 1973-kii.
>- Sheffield United ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso lix ka mid ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay booqatay Manchester United.
>- Red Devils ayaa barbareyn karta rikoorkeedii guuldarro la’aan ee ugu dheeraa horyaalka iyadoo ka hoos ciyaareysa macallin Ole Gunnar Solskjaer, markaasoo laga adkaan waayey 14-keedii kulan ee ugu dambeeyey xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
>- Guushii afaraad oo isku xigta oo Premier League ah oo ay ku gaarto garoonkeeda waxay la mid noqon doontaa rikoorkeedii ugu fiicnaa Kooxda Man Utd tan iyo markii Solskjaer majaraha u qabtay.
>- Man United ayaa saddex guuldarro oo horyaalka Premier League ah ku soo gaartay garoonkeeda fasal ciyaareedkan 2020-21, waxaana kaliya ay guuldarrooyin intaas ka badan xilli ciyaareedka oo dhan soo gaareen labadii fasal ciyaareed ee 2013-14 oo ay qaabileen 7 guuldarro iyo 2001-02 oo ay la kulmeen lix guuldarro.
>- Guushii 6-2 oo ay ka gaareen Leeds waa kulanka kaliya oo ay Manchester United dhalisay lix gool siddeeda kulan ee horyaalka oo ay xilli ciyaareedkan ku ciyaareen garoonkooda.
>- Bruno Fernandes ayaa ku lug yeeshay kala bar 66 gool oo horyaalka ay ka dhalisay Manchester United tan iyo markii uu kooxda u saftay kulankiisii ugu horreeyey, waxa uu dhaliyey 19 gool isagoo caawiye ka noqday 14 gool oo kale.
>- Yeelkeede, isagu hadda saddex kulan oo horyaalka Premier League oo xiriir ah gool ma dhalin mana dhiibin markiisii ugu horreysay.
>- Sheffield waa kooxda labaad ee guuldarrooyinka ugu badan la kulantay qeybta hore ee horyaalka, taasoo aan ognahay inay la kulantay 16 guuldarro 19 kulan oo ay ciyaartay horyaalka xilli ciyaareedkan kaddib Bolton Wanderers kal ciyaareedkii 1902-03.
>- Sheffield United ayaa shan dhibcood ka heshay horyaalka illaa iyo hadda waana dhibcihii ugu yaraa ee loo diiwaan geliyo marka la ciyaaro kala bar horyaalka Premier League.
>- Kooxda Tababare Chris Wilder ayaa guul la’aan ah 15-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay marti ahaayeen, tan iyo markii ay soo garaaceen Crystal Palace 01 bishii Febraayo ee sanadkii 2020.
>- The Blades guuldarradii 3-2 oo ay kala kulmeen Manchester United iyadoo lagu ciyaarayay garoonkooda bishii December waa marka kaliya oo ay goolal hal ka badan dhaliyeen mid kasta oo ka mid ah 22-koodii kulan ee tan iyo markaas ay ciyaareen horyaalka.